Ukuphupha intengiso Discover ➡️ Fumana kwi-Intanethi ▷ ➡️
Xa umfundi ebuzwa umbuzo eklasini kwaye engayazi impendulo, umntu afunda naye uhlala emnceda ngokumhlebela into elungileyo. Kwindawo esemantla eJamani oku kubizwa ngokuba kukuqikelela, kwinxalenye esemazantsi ibizwa ngokuba kukuxela. Oku kuthetha ukuhleba kunye nokunika isisombululo.
Ukuba ubhaqwa uhlebeza, bobabini abafundi bahlala bengena engxakini. Xa uphumelele, ukukopa kuthetha ukuba umntu uzenza ngathi ngumntu ophumeleleyo njengowakhe. Ngokukodwa xa usebenza kwimathematika, abantu bathanda ukuthetha kakhulu kwaye bakhohlise. Emva kwayo yonke loo nto, iziphumo ezichanekileyo zibala apha nazo kwaye ufumane amanqaku-ukujonga ngokukhawuleza kwigxalaba lommelwane wakho kuya kuphucula amanqaku akho. Ngaphandle kokuba umntu abanjwe yinkosi.
Kwiqonga lemidlalo yeqonga, intengiso yinxalenye yomsebenzi wobunyani. Ukuba umdlali ubambekile kwisicatshulwa sakhe, uthi amagama ambalwa (oku kubizwa ngokuba "kukukhuthaza") ukunceda imemori yokutsiba.
Ukuba umntu uphupha ngokuthetha, ukuthetha kwangaphambili, kunye nokusebeza, basenokujongana noviwo kungekudala. Mhlawumbi iphupha loyika imibuzo kwaye ulinde uncedo. Into ebalulekileyo ekutolikeni ephupheni ngumbuzo wokuba ingaba iphupha liyamxelela umntu ngokwakhe okanye liyayimamela into ethethwayo.
1 Uphawu lwephupha «xelela» - ukutolikwa ngokubanzi
2 Uphawu lwephupha «xelela» - ukutolikwa kwengqondo
3 Uphawu lwephupha «xelela» - ukutolika kokomoya
Uphawu lwephupha «xelela» - ukutolikwa ngokubanzi
Ukutolikwa kwephupha, uphawu lwephupha "yithi" kufuneka luvavanywe ngeendlela ezahlukeneyo. Ukuba iphupha lifumana indlela othetha ngayo into komnye umntu esikolweni, iphupha linakho isilumkiso ukuba. Kuba akusoloko uthandwa kuye. Ngamanye amaxesha omnye umntu uyayazi impendulo kwaye uyayicinga nje, okanye abafuni nje ukuba ubangenise engxakini ngokuthetha into.
Isimboli yamaphupha ibuza umphuphi ukuba acinge kakuhle kubomi bokwenyani, lowo amnika ulwazi. Ngaphezu kwako konke, kuya kufuneka uthathele ingqalelo iziphumo. Ngokwenkcazo yephupha, uphawu lwephupha "yitsho" lukwakukukhumbuza ukuba ungazenzi ungathandwa ngabanye njengabantu abaxakekileyo.
Ukuba iphupha lifuna umntu ukuba alixelele into, isimboli yephupha ekuchazeni iphupha inokuba sisicelo sokugxila ngcono kwiimfuno zobomi. lungiselela. Ukuba ume ephupheni njengomdlali weqonga kwaye ulinde ukusebeza, iphupha kufuneka liqwalasele uhlobo lomdlalo. Inokubonelela ngolwazi ngeendawo zobomi apho ungazakufunda nto.
Ngokubanzi, ilizwi olivayo ephupheni yindlela yokuchazwa kwephupha ukubonisa iimfuno zakho elubala. Ukuthetha kutsala umdla wento ebalulekileyo ekuphupheni kwaye yeyiphi ngakumbi Atención kufuneka inike. Awunakho ukwaziswa ngokupheleleyo malunga nemeko yokwenyani.
Ngokwenkcazo yephupha, uphawu lwephupha "xelela" ikwayisilumkiso malunga nokuhleba okungalunganga kunye neemfihlo zokulala. Iphupha linokuba ngumqondiso wokuba kufuneka ufune uncedo noncedo.
Uphawu lwephupha «xelela» - ukutolikwa kwengqondo
Ngophawu lwephupha "yithi ngaphakathi," i-subconscious izama ukuzenza ukuba iviwe ephupheni. Ngokwenkcazo yengqondo yephupha, iyalumkisa xa uphupha Iinzame zokuzonwabisa nabantu abangakuxabisiyo oku kwaye abaqhele ukwala amaphupha. Kwelinye icala, uphawu lwephupha lukwanokubonisa ukuba ukuphupha kuthanda ukuvumela abanye bahlebe into kuye, nangona eyazi ukuba ayimncedi.
Isimboli yephupha "yithi" ikugubungele isiphene ngokuzithemba. Ilizwi elikuxelela into ephupheni linako, ngokokutolikwa kwephupha, likwamele iinxalenye zobuntu ezingacinezelwanga ngenye indlela kwaye ezinokuviwa. Uphawu lwephupha "yithi" ngumnxeba woncedo lokufumana ingqalelo engakumbi.
Uphawu lwephupha «xelela» - ukutolika kokomoya
Kwinqanaba elidlulayo, uphawu lwephupha "yithi" luphawu lwento enye unxibelelwano ngokomoya. Ngokwenkcazo yamaphupha, amandla aphezulu okomoya azama ukuhambisa ulwazi olufihlakeleyo okanye ulwazi olufihliweyo kwabo baphuphayo.